अण्डाकाे उत्पादन बढेसँगै मूल्यमा गिरावट - नेपालबहस
अण्डाकाे उत्पादन बढेसँगै मूल्यमा गिरावट
| १२:३७:५४ मा प्रकाशित
३ फागुन, चितवन । सधैँ उतारचढाव भइरहने कुखुराको अण्डाको मूल्य घटेको छ । उत्पादन बढेको र खपत घटेसँगै मूल्यमा गिरावट आएको हो । स्वस्थानी व्रतकथा शुभारम्भ भएसँगै उपभोग घटेको छ । कोरोना सङ्क्रमणसँगै चल्लाको अभावमा हुँदा अण्डा दिने कुखुराको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो । पछिल्लो समय नयाँ कुखुरा बढेसँगै उत्पादन बढेपछि मूल्य घटेको नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले जानकारी दिए ।
अण्डाको मूल्य बढेका बेला बुढा कुखुरा बिक्री नगरेका कारण पनि उत्पादन बढी भएको उनको भनाइ छ । सामान्यतया अण्डा दिने कुखुरा एक वर्ष छ महिना पाल्ने गरिन्छ । अण्डाको मूल्य बढ्दा किसानले थप एक वर्षसम्म पाल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
मूल्य घटेसँगै कृषक प्रभावित बनेका छन् । सङ्घले माघ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी ठूलो अण्डा फार्म दर प्रतिक्रेट (३० वटाको) ३२५ र मध्यम रु ३०० कायम गरेको छ । यसअघि ठूलो अण्डाको दर रु ३६० र मध्यम अण्डाको रु ३४० सम्म पुगेको थियो । केसीले भने, “उत्पादन बढी र खपत घटेकै कारण अण्डाको मूल्य घटेको हो ।”
यो दररेटमा अण्डा बिक्री गर्दा खर्च धान्न मुस्किल हुने किसानको भनाइ छ । अण्डा उत्पादक किसान मदन पोखरेलले एउटा अण्डा उत्पादन गर्न रु ११.५३ लागत लाग्ने बतउँदै यो दररेटमा बिक्री गर्दा किसानलाई घाटा हुने बताए । उनका अनुसार अहिलेको दररेटमा बिक्री गर्दा झण्डै रु एक प्रतिवटा अण्डामा किसानले नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ ।
उपभोक्ताले भने सस्तो मूल्यमा अण्डा उपभोग पाएका छैनन् । उपभोक्ताले भने रु १५ मा अण्डा खरिद गर्न बाध्य छन् । विचौलियाले बढी नाफा खाएर उपभोक्तालाई महङ्गो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको पोखरेलले बताए । उनले भने, “सङ्घले समन्वय गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।”
सङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहेका किसान किरण ओली बजारमा अण्डाको माग भइरहेको भए पनि व्यवसायीको चलखेलका कारण मूल्य घटेको बताउँछन् । उनले भने, “म सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्दिनभन्दा मसँग एक हजार ५०० पेटी अण्डा थन्किएको छ ।” अहिलेको अवस्थामा सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भए पनि व्यवसायीको चलखेललाई केही किसानको सहयोगका कारण समस्या आएको उनले आरोप लगाए ।
घाटामा व्यवसाय गर्दा कुखुरा पाल्ने किसान निकै घटेको उनको भनाइ छ । दुई हजार ७०० हाराहारी लेयर्स कुखुरा पाल्ने किसान रहेकामा यो सङ्ख्या घटेर एक हजार ७०० मा झरेको उहाँले जानकारी दिए । ओलीले भने, “साना किसान विस्थापित र ठूला स्थापित हुँदैछन् ।”
अण्डाको नियमित उपभोगले मृत्युको जोखिम बढ्ने २ हप्ता पहिले
गोलभेँडा खेतीप्रति उत्साहित किसान उचित मूल्य नपाउँदा निराश २ हप्ता पहिले
मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा दैनिक व्यहोर्दै आयल निगम ३ हप्ता पहिले
बजारमा मूल्य झरेपछि काउली खेतीका किसान चिन्तित १ महिना पहिले
अलैंची खेतीप्रति उत्साहित किसान उचित मूल्य नपाउँदा निराश १ महिना पहिले
खानेतेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योग कारवाहीमा, तीन लाख जरिवाना १ महिना पहिले
भारतबाट मौरीको घार र गोला ल्याउन नदिन व्यवसायीको अनुरोध ४५ मिनेट पहिले
ट्रकले ठक्करबाट सफारी रिक्सा चालकको मृत्यु ४९ मिनेट पहिले
प्रचण्ड- नेपाल काठमाडौंमा २० घण्टा पहिले
थप ९४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि १७ घण्टा पहिले
अदुवाको भाउ घटेपछि इलामका किसान निरास २१ घण्टा पहिले
बुधबार निफ्राको शेयर ३२ रुपैयाँले घट्यो १८ घण्टा पहिले
तीन वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कति प्रगति ? २१ घण्टा पहिले
कोठाको ताला फुटाई विभिन्न धनमाल चोरी २१ घण्टा पहिले
शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्दै महेन्द्रनगर १९ घण्टा पहिले
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि बर्ड फ्लु देखियाे ५ दिन पहिले
भूमिहीन परिवारलाई एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण ३ दिन पहिले
नेरुडे लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने बिहीबार अन्तिम दिन ७ दिन पहिले
अस्पताललाई विगतमा दिइँदै आएको सहयोग निरन्तर रहने छ : पाकिस्तानी राजदूत ७ दिन पहिले
घरभित्रैका केही साथीहरूले जालझेल गरे : मन्त्री भट्ट २ दिन पहिले
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान श्रीलङ्का प्रस्थान २ दिन पहिले
शिवालय माविमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, १२० जनालाई पोशाक वितरण ४ दिन पहिले
कांग्रेसले भाेली देशैभर विरोध प्रदर्शन गर्ने २ हप्ता पहिले
आगामी बुधबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना २ हप्ता पहिले
संसद विघटन विरुद्धमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको प्रदर्शन २ हप्ता पहिले
सिरहामा होटल तथा रेष्टुरेन्टमा स्तरोन्नतिको स्टिकर टाँस २ हप्ता पहिले
खानेपानी योजना शुरु,स्थानीयवासी खुशी ४ हप्ता पहिले
कृषकले सेञ्चुरी बैंकबाट सहुलियत कर्जा पाउने २ हप्ता पहिले
जिल्लाकै ठूलो लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको परीक्षण, प्रतिसेकेण्ड १२ लिटर पानी १ वर्ष पहिले
भारतीय विदेशमन्त्री भन्छन– बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् ! ७ महिना पहिले
आज पनि मौसम बदली : सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बिहानैदेखि मेघ गजर्नसहित वर्षा ! २ वर्ष पहिले
नेप्से १.८७ अंकले घट्यो, कारोबार रकम एक अर्ब २ वर्ष पहिले